Retouch ny sary fialan-tsasatrao nefa tsy mila matihanina amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Retouch ny sary fialan-tsasatrao nefa tsy mila matihanina amin'ny Photoshop
Jorge Neira | | Photoshop
Ankehitriny dia mahazatra ny olona ny manana fahalalana fototra momba ny informatika, na dia mazava ho azy aza, mba hahafahana mitantana solosaina mora foana mila fanazaran-tena be dia be, fahalianana ary faharetana ampy.
manao famerenana sary amin'ny sary Maneho an'izao tontolo izao izay ahafahantsika mampifanaraka ny hevitsika sy mampiseho talenta eo am-panaovana izany.
Photoshop dia iray amin'ireo fampiharana izay zatra be miasa ny famolavolana ary mila fanoloran-tena be dia be koa ianao handinihana ny programa, fa misy ihany koa ny fahafaha-manao fotsiny fikitika tsotra tsy mila matihanina. Noho io antony io dia manonona tetika mora foana izahay hahafahana mamerina mametaka ny sarinao fialan-tsasatra nefa tsy mila matihanina amin'ny Photoshop.
Na eo aza ny teknika fanovana tsotra tsy mila dingana somary mivelatra sy sarotra, ilaina ny mampiasa fitaovana manana hery ampy ho an'ny asa toy izany, indrindra raha iray amin'ireo olona mampiasa sary manana kalitao tena tsara ianao.
Noho izany, afaka manisa isika fa laptop na birao izay misy mpikirakira tsara, toy ny Intel i5 na koa Intel i7, napetraka ny RAM ampy, farafahakeliny 4 GB, tsy maintsy manana karatra sary toa ny NVIDIA GeForce GTX ianao ary mazava ho azy kapila mafy tsara, izay iray amin'ireo safidy tsara indrindra azontsika raisina dia misy ny fahafahan'ny TB 1.
Raha vao eo am-pelatanantsika ny solosaina mety indrindra dia mila manao dika mitovy amin'ilay programa fotsiny isika sary tsara, izay amin'ity tranga ity dia Photoshop, Ka indreto misy tetika vitsivitsy hahafahana mamerina mametaka ny sarinao fialantsasatra nefa tsy mila matihanina amin'ny Photoshop.
1 Mamitaka hamerina ny sary ny dianao amin'ny Photoshop
1.1 Hanova ny sary
1.2 Ovao ny ambadika sary
1.3 Manamboatra kilema
1.4 Tongasoa majika hanaovana safidy
1.5 Ovao ny hamafin'ny loko
1.6 Manampia sivana
Mamitaka hamerina ny sary ny dianao amin'ny Photoshop
Hanova ny sary
Farafaharatsiny mba tsy maintsy nitranga taminay fa te haka sary izahay, mampakatra azy amin'ny internet ary hita ilay fampandrenesana ny haben'ny sary dia lehibe loatra, izay mazava ho azy fa nanandrana namaha izahay ary tamin'izany dia tsy afaka.
Ho an'ireo tranga ireo, Photoshop mitondra antsika ny vahaolana Amin'ny fomba tena tsotra. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny manokatra ny sary ary tsindrio ny safidin'ny haben'ny sary ary eto no ahafahantsika manova ny haben'ny sary voalaza amin'ny alàlan'ny fepetra isan-karazany.
Ovao ny ambadika sary
Ireo sary hita ao amin'ny PSD, BMP, na endrika TIFF, manana kalitao be loatra izy ireo.
Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny fanovana ny endrika amina endrika hafa, toa ny JPEG, izay iray amin'ireo maivana indrindra misy ary matetika ampiasaina matetika, satria hangeja ny sary amin'ny vokatra tsara. Mila manokatra tsotra izao ny sary ao amin'ny Photoshop isika, mankanesa any amin'ny menio ambony antsoina hoe fisie, kitiho ny Save As ary safidio ny endrika tadiavintsika ary ovay ny toetrany araka izay tiantsika.
Mba hialana amin'ireo fahasosorana ireo toy ny diabe ara-tsakafo na mole, Photoshop dia manome fitaovana iray ahafahantsika manitsy ity antsoina hoe ity Borosy fanasitranana. Raha hampiasa azy io dia mifantina an'io fitaovana io izahay, makà fizarana madio amin'ilay sary hamboarina ary apetaho amin'ny tsy fahalavorariana.
Tongasoa majika hanaovana safidy
Ity dia fitaovana iray izay afaka manampy antsika hanavaka mora foana ny singa iray amin'ny sary. Ny tsindrona majika mamela antsika hisafidy faritra mitovy amin'izany amin'ny sary voalaza ao anaty sakana iray.
Ovao ny hamafin'ny loko
Mba hanaovana izany, mandeha any amin'ny menio sary isika, mametraka ny kursor amin'ny setting ary tsindrio ny safidy mahery, izay hampiseho boaty misy slider roa, ny iray manondro ny hamafiny ary ny iray hafa ny saturation.
Ao amin'ny Photoshop dia afaka mahita sivana isan-karazany isika ary ity programa ity dia fantatra hatramin'ny nanombohany ilay galeriana lehibe raketiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Retouch ny sary fialan-tsasatrao nefa tsy mila matihanina amin'ny Photoshop
Salama Jorge, mahaliana ny anjara birikinao ary satria hitako fa mahafehy ny programa ianao dia te-hanontany aho. Amin'ny fitaovana inona no ahafahako manao ireo sarintany hiseho amin'ny habetsahana na amin'ny 3D effects? Misy rindranasa mamela ahy hiara-miasa aminy ve? Nahita iray antsoina hoe 3D Map Generator aho, ho io ve no tsara indrindra sy haingana hianarana?
Teknika sary tamin'ny lasa izay azo averina ampiasaina ankehitriny
Touch-up mora 13 izay afaka manome valiny tsara kokoa amin'ny fanovana sary amin'ny Photoshop